स्वतन्त्रताको गह्रौं भारी - Ujyaalo Nepal
स्वतन्त्रताको गह्रौं भारी
By ujyaalo	 On ३० भाद्र २०७७, मंगलवार १५:०२ 105
माेहनचन्द्र जाेशी ।
स्नातक पछि मैले महेन्द्रनगरको नर्सिङ क्याम्पसमा प्रशिक्षण गर्दा २ जना पिसकोर भोलन्टियरसँगै काम गर्ने मौका मिल्यो । सजिलोका लागि रीता र गीता नाम दिन्छु। दुवै जना अमेरिकी रजिष्टर्ड नर्स थिए।
रीता आफ्नो राज्यको सुन्दरीको ताज पहिरेकी, पढ्नमा चलाख, मान्छे चिनेर व्यवहार गर्न सक्ने र आँटिली थिइन् । उसलाई ‘म सँग बिहे गर्छौ?’ भनेर जिस्क्याउँदा “हुदैन, तिमी दुब्लो पातलो छौ, तिम्रो श्रीमती म भन्दा राम्री छ juicy sir” हाँसेर जवाफ दिन्थिन्। छोरी गर्भमा भएको बेला हस्पिटल जाँदा रीताले चेकजाँच गरेकोले मेरो श्रीमतीसँग उसको राम्रो चिनजान थियो।
गीता सानो छँदा आमाको मृत्यु व्यहोरेकी, ऋण काढेर पढेकी, पढाइमा औसत, सोझी, डराउने र इमानदार थिइन्।
एक दिन म क्लास सकेर स्टाफ रूममा फर्किदा गीता एक्लै बसेर रुदै थिइन्। मैले नजिकै गएर किन रोएको भनेर सोध्दा पछि भन्छु भनिन्। भोलिपल्ट दुबैको पिरियड खाली भएको बेला बाहिर आँगनमा घाम ताप्न बोलाइन्। क्यान्टिनमा चीया अर्डर गरेपछि बेलिबिस्तार शुरु गरिन्। “यहाँ बस्दा २ वर्ष साह्रै राम्रो र सजिलै बित्यो। अब अमेरिका फर्केपछि पहिलो काम जागिर खोज्नुपर्छ। जागिर कस्तो पाइएला थाहा छैन। जागिर पाएपछि पढ्ने बेलाको बाँकी ऋण तिर्नु पर्छ। अनि राम्रो केटा खोजेर घरजम गर्नु पर्छ। जागिर भन्दा केटा खोज्न झन गाह्रो हुन्छ। विवाह कति वर्ष टिक्ला? स-सानो कुरामा सम्बन्ध विच्छेद भयो भने जीवनमा कति वटा विवाह गर्नु पर्ला ? यसले मेरो कोमल मन कति दुखाउला? यस्तै कुराले अचेल मेरो चिन्ता बढेको छ।”
क्यान्टिनको थापा दाइले ल्याउनु भएको मिठो चिया पिउँदै रीताले आफनो मनको कुरा सुनाउदै थपिन “तिमी त भाग्यमानी हो, नेपाली पारिवारिक सँस्कार सार्है राम्रो छ। आमाबुबाले लेखाइ पढाइ दिन्छन्। विहावारि गरीदिन्छन्। भ्याएसम्म जागिर समेत खोजी दिन्छन्। विहे पछि पनि आमाबाबुले सगोल बसेर जीबनभरि तिमीलाई पल पलमा सहयोग गर्दछन । परिवारमा बालबालिका र बुढाबुढीको हेरचाह हुन्छ। हजुरआमा हजुरबाको स्याहार पाएका नाति नातिनी र नाति नातिनीको माया पाएका हजुरबुवा हजुरआमाको लागि यो धर्ती स्वर्ग भन्दा कम छैन। तिम्रो ईष्ट मित्रले पनि अप्ठ्यारो परेको बेला सहयोग गर्दछन।
अमेरिकी समाजमा चाहिने भन्दा बढी स्वतन्त्रताको गह्रौं भारी छ। आफन्तको सहयोग एकदम कम हुन्छ। छोरा छोरी बालिग भएपछि आमाबाबुको घर छोडेर अलग्गै बस्नु पर्छ। सरकारसँग ऋण मागेर पढनु पर्छ। आफ्नो जीवनमा आइपर्ने हरेक समस्याको समाधान आफै खोज्नुपर्छ। त्यसैले एकलकाँटे अमेरिकी समाजमा मानसिक रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ।
तुलना गरेर हेर्दा नेपालमा सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास धेरै भएको छ भने अमेरिकामा भौतिक विकासको गति उच्च छ। भौतिक विकास सँगै सामाजिक मूल्यको विकास हुन सकेको भए कति राम्रो हुन्थ्योॽ यस्तै कुरा दिमागमा खेलाउँदै गर्दा हिजो मेरो आँखामा आँशु छचल्केको थियो। आज तिमी सँग मनको वह पोखेपछि हलुका भयो।”
यति कुरा गरि सक्दा टिनिन्न घण्टी बजेपछि म गीतासँग छुट्टिएर अध्यापन गर्न कक्षाकोठातिर लागेको थिए। अहिले ती दुवै जना सँग मेरो सञ्चार सम्पर्क छैन। तर गीताले नराम्रो महशुस गरेकै एकलकाँटे परिवार/सँस्कार तर्फ नै मेरो समाज पनि बढ्दै गएको देख्दा चसक्क दुख्छ। साभारःhttps://www.facebook.com/mohanjoshibtd
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७७, मंगलवार १५:०२
सुव्वाजीलाई नेपाली कांग्रेस दोलखामा हार्दिक स्वागतःसभापति खड्का
ॐकारवाणीद्वारा अायाेजित “धार्मिक क्षेत्रमा धर्मगुरु, धर्माचार्य र बिद्वानजनको…